Analamanga, Analanjirofo, Menabe, Sofia, Atsimo Andrefana ary Vatovavy Fitovinany. Nohamafisin’ny Sekretera mpanatanteraky ny BNGRC fa tena ilaina ireo fitaovana natolotry ny BAD ireo izay hapetraka amin’ny governora isam-paritra ny fitantanana azy hiarahany miasa amin’ny teknisianina momba ny fifehezana ny loza. Ny fiantraikan’ny loza voajanahary toy ny rivodoza izay miteraka fandravan’ny tanàna no isan’ny mampihemotra sy mahataraiky ary mahatratra farany mihitsy ireo faritra izay lasibatra matetika. Tafiditra anatin’ny fametrahana ny fandaharan’asa ho fanohanana sy fanatsarana ny paik’ady mahomby sy maharitra hampidinana ny fiantraikan’ny loza eto Madagasikara izao fiaraha-miasa izao. Mandavan-taona ny fiatrehana ny loza sy ny tandindon-doza, hoy ny praiminisitra lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian nandritra ny fanolorana tamin’ny fomba ofisialy ireo fitaovana entina manamora ny famonjena ny traboina ireo